I-samsung galaxy watch active 2 vs galaxy watch, esebenzayo, kunye negiya s3: uphuculo olulungileyo?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Samsung Galaxy Watch Active 2 vs Galaxy Watch, Active, kunye neGear S3: uphuculo olulungileyo?
I-Samsung Galaxy Watch Active 2 vs Galaxy Watch, Active, kunye neGear S3: uphuculo olulungileyo?
Isamsung isandula ukubhengeza into entsha enokunxitywa- iGlass Watch Active 2- esiza kuthi siyibone kumsitho we-7 Agasti. Sisaphulelo esincinci kodwa esinentsingiselo ngaphezulu kokubukela okusebenzayo, okusungule ekuqaleni kwalo nyaka. Ngapha koko, umntu uya kuba elungile ukuthi 'i-Active 2 yile nto i-Galaxy Active ebefanele ukuba yiyo'.
Ke inantoni le wotshi intsha? Ijongeka kakhulu njenge-Galaxy Active yasekuqaleni kwaye inikwe amandla yi-Exynos 9110 chip efanayo ngaphakathi, kodwa ezo ziindawo apho ukufana kuqala ukuncipha.
I-Galaxy Watch Active 2 iza ngokwahluka kwe-LTE, eyenza ukuba ube nengqondo-ukukwazi ukuphuma ubaleke kunye newotshi yakho kwaye usaqhagamshelwa kuluncedo olukhulu. Iwotshi entsha iza ngobukhulu obahlukeneyo-i-40 mm kunye ne-44 mm- ngelixa indala ingena kuphela kwisilingana esincinci. Okokugqibela, kodwa kungaphelelanga apho, i-Galaxy Watch Active 2 yazisa kwakhona i-bezel ejikelezayo ... kakuhle, uhlobo lwe. Endaweni yokuba ne-bezel ejikelezayo ngoomatshini, inenyani-uskrole umxholo ngokuswayipha ngakwicala lomboniso.
Izinzwa ezintsha zokubukela ii-2 kunye neapos; zikwanokuphucula ixesha lokuphendula, ngokweSamsung nganye, kwaye zikuvumela ukuba ubeke esweni amanqanaba oxinzelelo ngokuqhubekayo ngexesha lokwenyani. Ewe, kukho & iiapos zekhompyutha ezixhasa ukufundwa kwe-electrocardiogram, kodwa i-ECG ayisebenzi kwisixhobo okwangoku. Kuyafuneka ukuba ifumaneke ngakumbi ezantsi emgceni emva kokwenziwa kovavanyo olufanelekileyo (ukuba uyakhumbula, iApple Watch 4 & apos; s ECG nayo yathatha iinyanga ukubakho).
I-OG yokuSebenza isebenza kuphela ngobukhulu obunye
Zonke ezi zinto zintsha zenza ukuba iGlass yeWatch eSebenzayo ijongeke njengohlobo lwedemo yale mveliso. Emva koko, sinokuphuculwa kwesoftware, enokuthi okanye ingafiki kwiimodeli ezindala ngohlaziyo. Okona kubalulekileyo, kukho iiapos ekugqibeleni Umlawuli weKhamera ebhakwe, ekuvumela ukuba usebenzise iifowuni ezibiniweyo zeSamsung kunye neepos; Isamsung ikwahlulelane nabaphuhlisi beCalm ukwenza ukulandelwa kokulala kunye nokucamngca kwi-Galaxy Watch Active 2, kunye neSpotify ukuzisa ilayibrari yakho yomculo kwi-Watch Active ngempompo enye. Kukho kunye neapps entsha, enokuthi ihambelane ngokuzenzekelayo nembonakalo yesixhobo kwimpahla yakho oyikhethileyo.
Ke, ewe, ukuba awukabinayo i-Apos esebenzayo kodwa bebeceba ukwenza njalo-qiniseka ukuba ujonga iGalaxy Active 2 kuqala. Iza kukhetho oluninzi (encinci / enkulu, ialuminiyam / intsimbi engenasici, iselfowuni) kwaye ngoku ijikeleze okungcono Ukubukela okusebenzayo.
Ngaba kufuneka ndiphucule ukuze ndibukele i-2 esebenzayo kwi-Galaxy Gear? Okanye iGear S3?
IGlass Watch Active 2 entsha ilula kwaye iza nezinto ezimbalwa ezipholileyo, yiyo loo nto ngokwemvelo ukuba abanini beModeli yeGlass Watch endala kunye neGear S banokuyijonga. Kwaye kunzima kwaye ukuphikisana nokufumana enye, ngokwenene. Ukubukela okuSebenzayo 2 kukuqala kokubonisa okusebenzayo okuza nesithethi kunye nemakrofoni. Ikwanayo nenguqulelo eneentsimbi ezingenanto ezingenanto kunye nomtya wesikhumba, ukuze ujongeke ngakumbi.
Ke, inamanqaku amaninzi awomeleleyo. I-Galaxy Watch kunye neGear S3 banezinto ezimbalwa eziza kubo, nangona kunjalo. Kwelinye, bathwala uyilo oluyiklasikhi lokwenyani, olubenza bajonge ngakumbi njengeewotshi eziqhelekileyo, eziphezulu, kunabalandeleli bomzimba obumenyezelayo. Kwaye banayo loo bezel yoomatshini, ethi icofe ngokwanelisayo ngalo lonke ujikelezo. Kodwa ngaba oko kwanele ukubagcina kumdlalo?
Ewe, ukuba uyayithanda indlela i-Watch Active 2 ejongeka ngayo kwaye irhawuzelela ukuphucula kuyo - qhubeka, ijongeka njengokuhlaziya okuhle ngeSamsung. Ukuba awunayo i-classic-styled watch - linda i-Samsung Galaxy Watch 2, asitsho.
Iivenzi ezimnyama ngolwesiHlanu zijongana 2020
I-iPhone 7 kunye ne-blue blue
Isiphelo esiphakamileyo seefowuni ezingenazingcingo
Ngaba i-Galaxy S21 iya kuba nekhadi le-microSD?
Isizukulwane sesithandathu i-Apple iPod nano ayisasaxhaswa yiApple
Iifowuni ezilungileyo kakhulu zabantwana (2021)